Travis Scott ဆီက Ferrari ကားလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ Kylie Jenner – FemaleWear.net
အရမ်းတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့ Kylie Jenner ရဲ့သတင်းကတော့ သမီးလေးမွေးဖွားပြီး နောက်မှာပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ social media အကောင့်တွေမှာလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ရက်နေ့မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် Kylie cosmetic အတွက် ပစ္စည်းတွေကို ဒီရက်ပိုင်းမှာဘဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါထုတ်လုပ်မယ့် Collection အသစ်ကတော့ သမီးလေး Stormi ရဲ့ နာမည်ကို inspired ယူထားတာဖြစ်ပြီး The Weather Collection လို့အမည်ရပါတယ်။
⚡ The Weather Collection ⚡ Launching Feb 28 3pm pst. Check out my stories to seeacloser look ? @kyliecosmetics
Calm Before The Storm & Eye Of The Storm Palettes ⚡ launching 2/28 at 3pm pst.
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Feb 25, 2018 at 12:48pm PST
အသက် ၂၀ ရှိပြီး New mother ဖြစ်တဲ့ Kylie Jenner ကို အမေရိကန်လူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း Stormi’s Daddy Travis Scott က လက်ဆောင်အနေဖြင့် အစီး ၅၀၀ သာ ထုတ်လုပ်တဲ့ Ferrari ကားအနက်ရောင်ကိုပေးခဲ့ပြီး ကားရဲ့တန်ဖိုးကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $1.4million (£1m) တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Kylie အတွက် ကားလက်ဆောင်ရတာ ဒါနဲ့ဆို ၃ကြိမ်တိတိရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမအကြိမ်ကတော့ သူမရဲ့ ၁၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ex-boyfriend ဖြစ်တဲ့ Tyga က Ferrari အဖြူတစ်စီးလက်ဆောင်ရခဲ့ပြီး ၁၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလည်း Tyga ကဘဲ Maybach Mercedes ကို birthday present အဖြစ်နောက်တစ်စီးထပ်မံလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Maybach Mercedes ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $200k (£143k) တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူမအတွက် ဒီအဖြစ်တွေကို သတိရနေမှာ ဧကန်မလွဲပါဘဲ။
Bonkers Closets ကတင်ပြလိုက်တဲ့ Jamie Chua ရဲ့ Closet တွေအကြောင်း